"ဆစ်ဂနယ်သခြင်း" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဆစ်ဂနယ်သခြင်း" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
၂၂:၃၆၊ ၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ
၁၇၇ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်
၂၃:၂၀၊ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၂၂:၃၆၊ ၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
အချိန်ပြတ် ဆစ်ဂနယ်သခြင်း ဟူသည်မှာ အချိန်တစ်လျှောက်ရှိ အဆက်ပြတ်နေသော အမှတ်နေရာများအလိုက်ရှိနေသည့် ဆစ်ဂနယ်များကို ပြုပြင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အင်နာလော့ အချိန်ပြတ် ဆစ်ဂနယ်သခြင်း ကို [[sample and hold]] circuits, analog time-division [[multiplexer]]s, [[analog delay line]]s and [[analog feedback shift register]]s တွင် အသုံးပြုထားသည်။ ယင်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆစ်ဂနယ်သခြင်း မတိုင်မီ ပေါ်ပေါက် အသုံးပြုခဲ့သော ဆစ်ဂနယ်သခြင်း ဖြစ်သည်။
''Analog discrete-time signal processing'' isatechnology based on electronic devices such as [[sample and hold]] circuits, analog time-division [[multiplexer]]s, [[analog delay line]]s and [[analog feedback shift register]]s. This technology wasapredecessor of digital signal processing (see below), and is still used in advanced processing of gigahertz signals.
The concept of discrete-time signal processing also refers toatheoretical discipline that establishesamathematical basis for digital signal processing, without taking [[quantization error]] into consideration.
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/119083" မှ ရယူရန်